CRM: Hukama Hukama Management Management | ECommerce nhau
Hukama hwakakosha pakuzadzisa zvinangwa, haisi ngano, ichokwadi: kana iwe usingazive matauriro, haubudirire, sevanyanzvi mune zvepfungwa uye bhizinesi vanoti kwete kuSpain chete, asi zvakare muchiRungu, chiGerman. uye nyanzvi dzeAmerica.
Uye kwete chete nekuti pasocial network ari pakati peanenge ese mabasa emusika nhasi, asi nekuti bhizinesi rega rega rinogara ne uye kune vatengi varo, vanova vanhu: kana bhizinesi risingazive kubatana nevanhu, rakangovharirwa kunyangarika, Kuti uite izvi, zvakakosha kuti uzive vatengi vako, uye kune izvi, zvinodikanwa shandisa CRM. Ndichiri kuziva kuti chii chinonzi CRM uye ndechei? Ichi chinyorwa chinokudzidzisa iwe zvese nezvazvo.
1 Tsananguro yekuti nei uchida CRM
2 Pane mhinduro, inonzi CRM.
3 Chii chinonzi CRM?
4 Akanakisa emahara uye akabhadharwa maCRM
5.6 Net Suite
5.13 nut shell
6 Nzira yekusarudza chaiyo CRM yebhizinesi rangu?
Tsananguro yekuti nei uchida CRM
Kutsanangura kukosha kwe CRM (Yehukama Hukama Management).
Ngatiti iwe uri nhengo yakanakisa yemhuri yako uye une hama gumi dzepedyo, uye unoyeuka zuva rekuzvarwa remunhu wese. Ngatitii iwe unotumira makadhi uye zvipo kune yega yeaya gumi hama, uye kuti haungorangarire chete mazuva avo ekuzvarwa, asi maadresi avo, uye ruzivo rwezvinhu zvavanofarira uye zvavanoda uye izvo, zvinoda kuti uvatengere zvipo zvezvavanowana senge. Ngatitii imwe neimwe yehama gumi inoroora uye mhuri yega yega ine mwana, isu takatotaura nezvehama makumi matatu, nema kero avo, mazuva ekuzvarwa uye ruzivo rwakakosha kuwedzera kune avo wawaive nawo kubva kune gumi rekutanga.
Ndipo panotangira matambudziko.
Hongu, tine makarenda nemadayari saka hatikanganwe izvo, asi izvo zvatisingakwanise kupa imari nenguva yekuenda kuzvitoro, kutenga zvipo, kuzviputira, nezvimwe. Zvino chifungidzira kuti idzo hama gumi ndivo vatengi gumi vekambani yako. Vatengi gumi vane data rakakosha rawakabata nemusoro, ehe, kuteedzera nevatengi gumi zvinogoneka, hazvigoneke.
Ipapo bhizinesi rako rinotanga kukura, kukwezva vatengi vazhinji, uye zvinoreva kuti unoshandisa nguva shoma pane wega wevatengi vako uye kuti iwe unotora nguva shoma kupindura email yega yega, uye shoma nguva yechipo chega chega.
Pane mhinduro, inonzi CRM.
Ndiro zita rakapihwa masisitimu kana mamodheru akagadzirwa kugadzirisa kusangana kwemakambani nevatengi vavo, azvino uye ramangwana. Iyo software inoshandiswa kuronga, kushandisa otomatiki uye kuwiriranisa nzvimbo dzese dziri mukati mekambani yako kugadzirisa hukama nevatengi vako
Akanakisa emahara uye akabhadharwa maCRM
Kuti ikubatsire kugadzira kana kugadzirisa hukama hwauinahwo nevatengi vako, isu tinokupa yakazara runyorwa rwemahara uye akabhadharwa maCRM (uye zvese zviri zviviri), ichikuudza zvakwakanakira uye mashandiro ayo, uchivimba kuti iwe unowana mhinduro yakanaka yekambani yako. Zvitore.
Zvirokwazvo imwe yeiyo akanakisa CRM pamusika, nekuti yakanangana nemakambani madiki anoda mhinduro dzakareruka uye dzakazara, uye haina kukurudzirwa kumakambani ane kukura nekukurumidza uye / kana huwandu hukuru hwevatengi. Iyo yemahara vhezheni ndeye yakakwira yevatengi gumi.
Zvakanakira izvi ndezvi:
• 360º chiratidzo cheumwe neumwe mutengi
• Unogona kuita michina
• Inobatana nemasocial network, kutevera vatengi vako pavari
• Ine app yeIOS uye Android
• Kubatanidzwa neGoogle Analytics
Ndicho Inogoneka CRM, uye kukosha kwayo ndeyekuti inoshanda pasi pePHP neMicrosoft SQL Server, uye iri sarudzo yakakomba kumakambani madiki uye makuru. Iyo ine yakanakisa mushandisi interface, nharembozha, hwaro hweruzivo, rakanakisa technical technical, uye yakasarudzika dashibhodhi yeCRM basa.
Iyo ine mukana wakakura wekuchinjika, kuve nekugona kuita mhando dzese dzezvinhu, nekuti ivo vavaki vanoziva kuti kambani yega yega inogadzira chimiro chehukama nevatengi vayo, saka kugona kwayo hakugumi.
Iyo yemahara software imwe nzira, kuti iwe ugone kugadzirisa yako yese koni kune yako kufarira.
Izvo zvakagadzirirwa kuve iyo open source imwe sarudzo iri pamusoro, SugarCRM uye iri chaizvo yakavakirwa pane ayo akavhurwa sosi vhezheni. Yakagadzirirwa vanhu vanotova nevatengi vakasimba, uye vane basa rekubhadhara rinoita mhinduro yehukama hwako nevatengi, kubva pa € ​​15 pamwedzi.
Iyo mhinduro kumakambani madiki, ayo asingade monstrous software mhinduro dzevhoriyamu vatengi. Vakagadzira iyi software kufunga kwemakambani madiki, asi basa ravo rakakura, zvakanyanya zvekuti havagone kutambisa nguva, kunyangwe kana vaine chete vatengi gumi. Basa nderekutengesa nekugadzira.
Zvakanakira kwazvo ndezvi:
• Yakazara manejimendi manejimendi inounganidza ruzivo rwese rwemumwe mutengi
Inobatanidza manejimendi manejimendi kune wega mutengi, kubatsira makambani anopa mabasa akasarudzika
Manejimendi manejimendi inoitwa mukati meiyo imwechete sisitimu: nhanho, mishumo uye kududzirwa kweruzivo rwakagadzirwa
• Inobatana zvakakwana nemasocial network emumwe mutengi
Salesforce ndeye yakakosha mhinduro, sezvo zvichitora hukama nevatengi kune imwe nhanho: mukati me software yayo haungogadzirise hukama nevatengi chete, asi iwe unogadzirisa kuvhara kwekutengesa navo mukati mayo. Iyo Salesforce CRM inomhanya kubva mugore, Kufambisa mukana kune chero saiti uye chishandiso.
Mhinduro ichaita kuti vazhinji vadanane, uye zvayakanakira ndeiyi:
• Yekubata manejimendi yeimwe nhanho: data rekutanga, ine nhoroondo yekushandisa, kuravira, saiti yako mune yekutengesa fanera, zvemukati manotsi, social network, nezvimwe.
• Tora zvinoitwa nemutengi wega wega kuti uwedzere huwandu hwevatungamiriri pamawebhusaiti ekambani
• Inopa ruzivo kuziva nzvimbo yekutengesa mukana nemumwe mutengi
• Gadzira kutengesa mamiriro mune chaiyo nguva
• Yakasarudzika uye chaiyo-nguva mishumo
Vari zviri nyore kumisikidza seInsightly, kunyange iri shoma. Uya pamwe chete ese masocial network mune imwechete yakabatana yekuonana "bhuku" uye inbox. Chinangwa ndechekuchengeta manejimendi akarongeka pane akawanda mapuratifomu uye kubatsira manejimendi kugadzira vatengi nyowani.
Iyo inoonekera intuitive uye inokurumidza uye inobatsira kuronga zvirinani nguva uye inovimbisa kuburitsa ruzivo rwakakodzera kubazi rekushambadzira Yayo chete "flaw" ndeyekuti haina kupatsanura manejimendi evatengi uye vanogona vatengi.
Hatchuck pamwe ndiyo iyo akanakisa CRM ezvitoro zvepamhepo kubatsira kugadzira misika yekushambadzira yakasarudzika. Semuenzaniso: chitoro chemimhanzi chinogona kugovera vatengi vayo mune avo vanotenga madhiramu, magitare, piyano, nezvimwe.
Kunongedzera ikoko kunobatsira kutumira makuponi ekushambadzira, kupihwa kwakasarudzika, nezvimwe. Hatchbuck inotumira, semuenzaniso, yakaderedzwa coupon mushure maawa mashoma mushure mekunge mutengi wako atenga kana kusiya ngoro yekutengesa yasiyiwa.
Kana iwe uchida kubatanidza zvese mune yako Microsoft system, Dynamics ndeye yakanakisa CRM iyo inosanganisirwa mushe neMicrosoft SharePoint, Microsoft Outlook, uye Microsoft Office, uye kunyange Windows Mobile 10.
Pasina mubvunzo kutaura, zvese zvakanakira chimwe nechimwe chezvirongwa izvi zvekugadzirisa hukama hwevatengi. Iyo iri zvachose 'isingaite' CRM.
Ndicho CRM yakatarisana nekutengesa chizvarwa hunopfuura hukama hwakareruka nevatengi, uye ine mhinduro dzakasiyana padanho rega rega revatengi, kwete imwe yemhando dzese dzemabhizinesi. Kubatsira kwayo kukuru ndekwekuti inozadzisa sevhisi yayo neakagara akakurudzira uye anozivikanwa Basecamp maneja weprojekiti, saka kana iwe ukabatanidza ese ari maviri, une inoyevedza ecosystem.
Iyo sarudzo yegore yakatarisana nemabhizinesi ane bhajeti repamusoro uye chishuwo chekusimbisa kana kugadzira rakasimba gore-based bhizinesi system. NetSuite inopfuura CRM- Unogona kubata zvese zvirimo: zvinyorwa, e-commerce zviitiko, kutenga maodha uye zviwanikwa zvevanhu.
Ndeimwe yeakanyanya varume vakuru veCRM nyika uye zvisinei neizvi, ine nhamba yakakura yevateveri. Iyo isoftware inogoneka, ichienzaniswa neese atataura, uye yakanangana nemapoka evashandisi 5-25. Inobatanidza zvisina musono neAptlook uye QuickBooks.
Iwe unoda here kuti uwane ruzivo rwako rwekuonana nekukurumidza kuona? Izvi ndozvinoitwa naClevertim, uye ndiko kugona kwayo: inoratidza pfupiso yeruzivo rwekuonana kurudyi kwechiratidziri, saka kana uchida rumwe ruzivo, unoriwana zviri nyore uye nekukurumidza.
Unogona kusefa vatengi vako nemazita, nzvimbo, uye chero firita yaunofunga nezvayo, woita mabasa kubva kwazviri, uye ugone kuita yakanyanya kutungamira mishambadziro yekutengesa.
vtiger inoita chaiyo manejimendi yeanobata-centric CRM, asi zvakare inosanganisira yakasanganiswa email inbox yekutaura zviri nani. Zvichienderana nezano, iwe unogona kuve nerutsigiro sisitimu yekupindura email mameseji kune ako vatengi uye nekuvaka zvinyorwa zvechigadzirwa chako kana sevhisi.
Uye zvakare, ine chirongwa che manejimendi manejimendi kuronga zviri nani basa uye kuziva kuti chirongwa cheumwe neumwe mutengi chiri sei. Zvese zviri munzvimbo imwechete, ichi chiri icho chakanyanya kukwezva.
Capsule inoteedzera uye inochengetedza vatengi, vatengesi, vezvenhau uye kunyangwe vashandi vekambani yako, vakuru kana vadiki. Capsule inokutendera iwe kuti ugadzire akasiyana ekunyora mazita Zvichienderana neprojekti uye kukosha kwayo kukambani yako, icho chinhu chinopa mukana, nekuti makambani mazhinji anopa kukosha kwakasiyana kumarudzi akasiyana evatengi.
Iyo inokutendera iwe kuti uone kuti yave yakareba zvakadii kubvira pawakabatana nemunhu mumwe nemumwe, kusangana kwavo kwekupedzisira, uye iyo inokutendera iwe kuti ushandise zvakakosha mabasa ekumisikidza hukama nevatengi, vatengesi nevashandi.
Bhizinesi rega rega rinoda ruzivo rwakasiyana kuteedzera, uye kurishandisa nenzira dzakasiyana, ndizvo zvinoita Solve360. Uye zvakare, iyo inokutendera iwe kuti ushandise yakasarudzika minda, zvinyorwa, zviitiko zvezviitwa uye zvimwe zvinhu kugadzirisa ruzivo rwako.
Uye zvakare, inosangana zvakakwana neGoogle Apps, ichiratidza ruzivo pane iyo Gmail skrini, chimwe chinhu chinonyanya kubatsira, nekuti haufanire kuenda chero kumwe kunotora ruzivo. Zvakare inosangana neGoogle Mapepa ekutsika kwetsika, pasina kusiya Google ecosystem.
Batchbook rinopfuura yakasarudzika CRM kubatanidzwa kune vezvenhau uye email- Inotarisa pakubatana zvisina mutsigo neHootsuite, maneja maneja wezvemagariro nhasi. Iwe unogona kubatanidza ako masocial network muHootsuite uye uone iyo CRM dhata iri padhuze nayo.
Nutshell inogadzirwa nehunhu mupfungwa, hongu, asiwo kubvisa chikamu chinofinha cheCRM, ichiwedzera kunakidzwa uye hunhu kushanda. Iwe unowana ruzivo rwakakosha kubva pasocial network, kunyanya Twitter.
Ndicho Yakanaka CRM yeindasitiri nyanzvi iyo inopa sevhisi kune wechitatu mapato, uye inoburitsa ruzivo rwakadzama kubva kune yega yega yekubata uye ine maturusi ekutsvaga vangangoita vatengi uye mishumo nezvekuita kwebasa rakaitwa, ine yakapusa uye yakanaka interface.
Nzira yekusarudza chaiyo CRM yebhizinesi rangu?
Sezvawaona, pane akasiyana siyana mhinduro dzeCRM basaPanyaya yemutengo, kushandiswa, uye zvinangwa zvakasiyana, mubvunzo wakakosha ndewokuti: Ungasarudza sei CRM chaiyo? Isu tinokupa iwe mamwe maitiro kana matipi ekuti iwe usarudze zvirinani:
1. Huwandu hwevashandi: Hausi chete kuti mutengo unowedzera, asi manejimendi akaomarara kana uine zvakawanda, kunyanya vashandi ndivo vari kutarisira manejimendi.
2. Chinangwa cheCRM yako: Sezvawaona, ese maCRM ane akasiyana akasiyana mashandiro, mamwe akagadzirirwa kutsvaga vangangove vatengi, vamwe kuvhara kutengesa nevatengi vekare vatengi, nezvimwe. Iwe unofanirwa kuve wakajeka nezve icho chinangwa chauri kutsvaga mukutungamira kweCRM yako.
3. Kubatanidzwa kune imwe software: Isu takaona kuti vamwe vanobatana neGoogle Apps, vamwe neHootsuite, nezvimwe. Iwe unofanirwa kufunga nezve iyo system yauchazoshandisa iyo ruzivo.
4. Special mabasa: Isu takaona kuti CRM yega yega ine hunhu sei vamwe vasina, ongorora yega yega uye sarudza kuti ndeapi anopa zvakanakira bhizinesi rako.
5. Mutengo: Sarudza kuti yakawanda sei yaunoda / yaunogona kubhadhara software, funga nezvayo maererano nemutengi uye pamwedzi, nekuti ndiwo maratidziro anoitwa mitengo yeCRM.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » CRM: Hukama Hukama Management
Juan C. Count akadaro
Handina kumboona chinyorwa chakapfava kudaro uye chakazara nezvikanganiso zvakawanda kwenguva refu.
Ndanga ndichishanda muCRM kwemakore makumi maviri, kana uchida zano ndichafara kukupa ruzivo rwangu rwemahara.
Pindura Juan C. Conde
Zvakanakira kushandisa masocial network kune iyo Ecommerce yebhizinesi rako